Puppy Yekudzivirira Chirongwa: Chii Shots & Rini - Hutano
Puppy Yekudzivirira Chirongwa: Chii Shots & Rini
Puppy kupfura ndeimwe yenzira dzinodhura kwazvo dzekudzivirira zvirwere uye kubatsira vana vadiki kurarama hupenyu hwakareba uye hune hutano.
Kune vazhinji varidzi majekiseni ekudzivirira anogona kuvhiringidza, kunyanya kana iwe uchifunga yepakati uye isiri yepakati pfuti.
Mbwanana kukura kwazvo saka puppy kupfura purogiramu yakakosha kuvachengeta vakagwinya uye vakachengeteka.
Kuziva nguva yekuendesa mbwanana yako kumaveti, ayo anopfura kuti uwane, uye kuti yakawanda sei yekubhadhara inonyanya kukosha mukati megore rako rekutanga.
Puppy Yekudzivirira Chirongwa
Mishonga muvhiki 6 kusvika ku8
Mishonga muvhiki 8 kusvika ku12
Mishonga muvhiki 12 kusvika ku15
Mishonga muvhiki 16+
Puppy Kuchengetedza Mitengo
Ndeapi Mapfuti Anoda Mbwanana Dzinoda Uye Rini?
Kennel Chifa (Bordetella Bronchiseptica)
Akawanda Sei majekiseni Anodiwa Nembwa?
Nei Dzimwe Puppy Shots Dzisiri-Core?
Marutivi Mhedzisiro YePuppy Vaccines
Vazhinji vafudzi vane mukurumbira vanozoona kuti yekutanga mbwanana kupfura inoitiswa isati yadzokazve.
Ita chokwadi chekubvunza wako wekubereka kuti ndeapi mapfuti kana bvunzo dzehutano dzakapedzwa uye unotora makadhi ekudzivirira ( pazvinenge zvakakodzera ).
Mbwanana yako isati yave nemubatanidzwa wekudzivirira (vhiki yegumi) unofanirwa kudzikisira kuratidzwa kwavo munzvimbo dzeruzhinji. Izvi zvinobatsira kudzikisa mukana wavo kubata chero hutachiona hutachiona .
Iyo yakajairwa puppy yekudzivirira chirongwa ichatenderera pamusoro mbwanana yako mavhiki makumi maviri ekutanga .
Iwe unofanirwa kutarisira kushanyira vet wako kakawanda nekuda kwepfuti, zvinowedzera uye kuongorora kwehutano mukati memwedzi mishoma yekutanga:
Chaicho Puppy Shot Chirongwa
Mavhiki matanhatu kusvika masere 1x Musanganiswa wakabatanidzwa ye: distemper, adenovirus, parainfluenza, uye parvovirus Canine furuwenza
Mavhiki masere kusvika gumi nemaviri 1x Yakasanganiswa jekiseni rekudzivirira Canine furuwenza yechipiri dose
12 - 20 mavhiki 1x Rabies yakapfurwa ( chaiwo anoti chete ) Leptospirosis booster
Chirwere cheLyme chinowedzera
At masvondo matanhatu kusvika masere ekuberekwa , vana vanofanirwa kungofamba mumba ( kana muyadhi yega ) kudzikisira kuratidzwa kwavo munzvimbo dzine njodzi. Ivo vanofanirwa kutorwa uye kutakurwa munzvimbo dzinogona kunge dzaive nedzimwe imbwa.
Munguva ino yenguva pfuti imwe chete yemusanganiswa wekudzivirira hutachiona inodiwa. Izvi zvinosanganisira adenovirus (hepatitis inotapukira), parvovirus uye parainfluenza (DHPP).
Booster doses vanopihwa maviri kana mana mavhiki mushure mekutanga kwavo jekiseni.
Mbwanana dzinogara munzvimbo dzine njodzi huru dzavanowanzo kupihwa chikamu chechitatu uye chekupedzisira pamasvondo gumi nemasere ekuberekwa.
Canine furuwenza isiri-yepamoyo (sarudzo) kupfura iyo inogona kupihwa kubva kumavhiki matanhatu ezera. Maviri madosi ekutanga anodikanwa maviri kusvika mana mavhiki akapatsanurwa.
Veti yako inokurairira iwe kana iyo yakasanganiswa distemper booster kupfura ichidikanwa. Inogona kupihwa mavhiki maviri kana mana mushure mekudzivirira kwekutanga.
Kazhinji akabatanidzwa distemper vaccine booster anopiwa pavhiki pfumbamwe.
Munguva ino yevhiki mbiri pane matatu majekiseni asiri epakati:
Mushonga weBordetella unogona kupihwa kubva pamasvondo masere ekuberekwa. Nekudaro, kana mbwanana iine njodzi yakawedzera yekukosheswa kwekukosora kwekennel saka mushonga uyu unopihwa pamasvondo mana ekuberekwa.
Leptospira inogona kupihwa pavhiki sere kana imbwa iri panjodzi kubva kunzizi dziri pedyo, nyanza kana hova. Chipiri chechipiri chinodiwa vhiki nhatu kana ina gare gare.
Pakupedzisira, jekiseni reLyme rinogona kupihwa pavhiki repfumbamwe. Dzimwe nguva pfuti iyi inozivikanwa se borrelia burgdorferi uye booster dose inodiwa mavhiki maviri kana mana mushure mekutanga.
Iwo maRabies akapfura ari epakati kana asiri epakati zvichienderana pamunogara .
Tarisai hutungamiriri hwenharaunda
Kana iri yepfuti yepakati, inofanira kupihwa mushure memasvondo gumi nemaviri ekuberekwa.
Chipiri chechipiri chinodikanwa gore rinotevera dosi rekutanga.
Kana iwe uchigara munzvimbo ine njodzi huru imbwa yako inozowana wekupedzisira jekiseni rekudzivirira remushonga, parvovirus, adenovirus uye parainfluenza pavhiki gumi nesere.
Mbudzi zhinji dzinenge dziine vakapedza yavo yekudzivirira puppy chirongwa nevhiki 16 . Unozobva waronga booster shots yavo .
Mushonga wekudzivirira weparemper, parvovirus, adenovirus, uye parainfluenza inoda kudzokororwa mukati megore rimwe rekupedzisira muyero. MaBoosters anozopihwa panguva dzinoenzana dzemakore matatu.
Rabies inoda kudzokororwa pakati pegore kusvika matatu.
Hapana-epakati majekiseni akadai seBordetella, Leptospira, Lyme uye Influenza inoda revaccination pagore.
Mutengo weputi weputi unonyanya kutemerwa nekwaunogara, mubhadharo wako vet wajija uye kuti mangani asiri epfungwa majekiseni ako mbwanana. Fonera emuno vechiremba maitiro kuti uone kana paine musiyano wakakura wemutengo.
Ivhareji mutengo wekubaiwa nembwanana $ 75- $ 150 .
Uyu mutengo unogadzirwa nemaviri epakati mapfuti:
Mushonga wekudzivirira hutachiona wakajairika ndiye DA2PPV uye inodhura $ 20.
Zvichienderana nedunhu rako, jekiseni reRabies rinowanzoita madhora gumi- $ 15.
Matatu asiri epakati epfuti:
Bordetella - $ 20.
Leptospirosis - $ 20.
Canine furuwenza - $ 30.
Lyme - $ 50.
Zvizhinji puppy akapfura mashedhi anotanga pamasvondo matanhatu ezera neiyo yepakati yakasanganiswa distemper jekiseni. Chipiri chechipiri chinopihwa vhiki mbiri kana ina gare gare. Asina-musimboti canine furuwenza uye Bordetella majekiseni anogona kupihwa panguva imwe chete.
Ipapo isiri-yepamoyo Lyme uye Leptospirosi kupfura kunogona kupihwa pamasvondo mapfumbamwe.
Chekupedzisira, maRabies haafanire kupihwa kumberi kwemasvondo gumi nemaviri uye iri mushonga wepamusoro kune dzimwe nyika ( semuenzaniso Washington neKentucky ).
Weti yako ichakupa zano pane chirongwa chekusimudzira yekubaya majekiseni imbwa yako.
Nehurombo, imbwa dzinogona kuratidzwa kune dzakasiyana siyana hosha dzimwe nguva dzinouraya. Dzimwe nzvimbo dzenzvimbo mumatunhu dzine njodzi kupfuura mamwe.
Izvo zvakakosha kuti iwe unzwisise akasiyana puppy shots anowanikwa uye ndeapi maropa inyaya mudunhu rako.
Ichi chirwere chinotakurwa nezvikwekwe icho chinotapukira kubva kuchikwekwe chine utachiona pavanoruma imbwa yako. Izvo zvinokonzeresa huwandu hwenyaya munhengo nemumajoini.
Anonyanya kutakura chirwere cheLyme chiteketekete cheblacklegged.
Zvikwekwe zvinotapukirwa pavanodya mhuka ine hutachiona. Havagoni kubhururuka kana kusvetuka, saka vanomirira muhuswa hurefu vobata imbwa pavanenge vachikwesha.
Zviratidzo zvechirwere cheLyme imbwa inosanganisira: kupisa, kurasikirwa nechido, simba rakadzikira, kukamhina, kuomarara uye kuzvimba kwemajoini. Pakupedzisira, zviratidzo zvinofambira mberi kusvika kukundikana kwetsvo.
Pfuti iyi inosarudzika nekuti kune mamwe nzira dzekubatsira kudzivirira imbwa yako kubva kuzvikwekwe :
Tarisa imbwa yako kuti haina zvikwekwe mushure mekufamba. Tarisa pamakumbo avo, pamiromo uye nenzeve dzavo.
Bvisa chero zvikwekwe nekukurumidza sezvazvinogona kushandisa yakatarwa tiki chishandiso. Bata chikwekwe uye monyorora zvishoma nezvishoma. Ita shuwa kuti une chikwekwe chose kusanganisira nemusoro.
Nguva dzose shandisa flea uye chishambwe chinodzinga mushonga. Iwe unogona kumwaya yavo bandana nekora. Sezvo nezvose zvinogadzirwa tarisa zvinoshandiswa uye nekutsvaga usati waisa chikumbiro.
Chirwere cheLyme dzimwe nguva chinogona kurapwa nemishonga inorwisa mabhakitiriya, asi zviratidzo zvinogona kupfuurira uye kurapwa kwenguva refu kunogona kudikanwa.
Rabies hutachiona hunokanganisa uropi uye musana wembwa.
Inopfuudzwa kuburikidza nemate yemhuka ine hutachiona, semuenzaniso kuruma. Imbwa dzinoratidzwa kumhuka dzesango dziri panjodzi yekutapukirwa.
Zviratidzo nezviratidzo zvinogona kusaratidza kwemasvondo maviri kusvika masere mushure mekurumwa, zvisinei, kana zviratidzo zvikangoonekwa zvinowanzo guma nekufa. Zviratidzo zvinosanganisira:
Kunze kwehunhu hunhu.
Kutsenga panzvimbo yekurumwa.
Mushonga wekurwisa rabies unogona kunge uri wepakati kana kusiri wepakati mudunhu rako. Zvisinei, njodzi yemarabi ndeyechokwadi chaizvo kana kuratidzwa kungangoitika. Iko hakuna ikozvino kurapwa kana kurapwa. Ndokusaka kubayiwa nhomba kuchiwanzo kusungirwa kumatunhu mazhinji.
Kennel chikosoro chirwere chekupemha chinokonzerwa neakawanda mabhakitiriya uye hutachiona. Utachiona hwakajairika ndiBordetella bronchiseptica.
Imbwa dzinotapukirwa munzvimbo dzakazara vanhu senge mapaki embwa uye makennels ndosaka ichizivikanwa sekennel kukosora.
Zviratidzo zvacho zviri pachena nekukosora kwekubira, Kuhotsira uye mhino inomhanya .
Imbwa dzinowanzo rwara kwevhiki imwe chete kana mbiri.
Zvinogona kukonzera kunetseka kune imbwa dzakwegura, vana kana avo vane immune system isina kusimba.
Parainfluenza hutachiona hwakajairika hunokonzeresa kukosora kwekennel ( mushure meBordetella bronchiseptica ).
Canine parainfluenza inopararira zvakanyanya. Zviratidzo, zvakanyanya senge kennel kukosora, zvinosanganisira yakaoma yekugunun'una chikosoro, fivhiri, dzimwe nguva inomhanya mhino, kuhotsira uye kuzvimba kwemaziso.
Inopfuurwa zviri nyore munzvimbo dzinowanikwa imbwa senzvimbo dzinochengeterwa mhuka, pekugara uye zvitoro zvezvipfuyo.
Chirwere chinotapukira chinokonzerwa nehutachiona hweLeptospira chinogona kukanganisa vanhu nembwa ( kureva chirwere chezoonotic ).
Aya mabhakitiriya ari inowanikwa muvhu nemvura .
Imbwa dziri panjodzi kana dzikanwa kubva munzizi, nyanza, nzizi kana kupedza nguva uchifamba-famba munzvimbo dzekumaruwa nekusangana nemakonzo ane hutachiona.
Zviratidzo zveLeptospirosis zvinogona kusanganisira: kupisa muviri, kubvunda, kuneta, shanduko mukuita chimbuzi, kupera mvura, kurutsa, kurasikirwa nenzara uye jaundice.
Inowanzo kurapwa nemishonga inorwisa mabhakitiriya, asi kukuvara kwenguva yakareba kunogona kunge kwatove kwakaitwa.
Parvovirus ndiyo inonyanya kutaurwa nezve hutachiona hwembwa nekuti inopararira zvakanyanya, inokonzera chirwere chemudumbu uye inogona kuuraya.
Parvovirus inoda pakarepo vet kutariswa .
Uyu mushonga unokosha. Iwe unofanirwa kudzikisira kuratidzwa kwembwanana yako kune chero njodzi kusvika vapedza yavo booster kupfura.
Iyo Parvovirus inopararira kuburikidza nekubata nembwa ine hutachiona kana kuburikidza mutsvina yembwa ine hutachiona .
Iyo hutachiona hwakasimba hunogona kurarama pane vanhu, zvinhu uye nharaunda. Iyo inopesana nevazhinji vanowanzo shambidza dzimba uye inogona kugara mukati mekupisa kwemukati kwemwedzi miviri.
Zviratidzo zveparvovirus zviri pachena: fivha, kurutsa, kuneta, kuonda, kushaya simba, kushushikana uye kupera simba.
Wako imbwa poo ichava manyoka ane ropa nekunhuhwirira kwakanyanya.
Kunge parvovirus, distemper inotapukira zvikuru uye inogona kuuraya. Ndizvo yepakati puppy kupfura nechikonzero chakanaka.
Distemper inokonzera chirwere chakakomba nekurwisa muviri wembwa .
Zviratidzo zvinosanganisira: maziso ane mvura, fivha, kuneta, kukosora, kurutsa, uye kunetseka kufema. Nhanho dzekupedzisira dzekuremerwa dzinoguma nenyaya dzetsinga.
Inokurumidza kutapurirana kuburikidza: kusangana nemhuka ine hutachiona ( semuenzaniso raccoons, makava, coyotes, ferrets, uye mink ), kuburitswa nemhepo kana kubva kunhokwe yamai yembwanana. Kana imbwa yako ichikwanisa kuwana mhuka dzesango izvi zvinovaisa panjodzi.
Kusiyana neparvovirus, distemper inogona kuuraiwa nevazhinji mishonga inouraya utachiona.
Canine coronavirus iri hutachiona hutumbu imbwa izvo zvinokonzeresa kusagadzikana kwemudumbu.
Iyo inobvumidzwa nekuratidzwa kune hutachiwana fecal nyaya kana kubata nembwa ine hutachiona.
Pane hapana kurapwa chaiko ye canine coronavirus. Nekudaro, kana imbwa ikava nemvura, IV mvura dzimwe nguva inodikanwa.
IAmerican Veterinary Medical Association inonyora iyo canine coronavirus puppy kupfura seisina-musimboti uye isingakurudzirwe.
Canine hepatitis chirwere cheropa inokonzerwa ne canine adenovirus.
Inopararira nekusangana nemvura yemumuviri yakadai se: mate, kubuda mumhino, ropa, weti netsvina.
Chiratidzo chekutanga chirwere chepamusoro-soro chinoteverwa nezvimwe zviratidzo zve: kuneta, nyota, kubuda kweziso, kurwadziwa mudumbu uye kurutsa.
Canine Hepatitis inogona kuuraya, asi njodzi yakakwira muvana.
Masero ekudzivirira amai inopindira nekudzivirira yembwa kusvika dzave nesvondo kusvika gumi nemasere ekuberekwa. Saka bara iri rinofanira kupihwa mushure memavhiki gumi nemaviri ekuberekwa.
Imwe chete mbwanana yakapfura yeempemper, adenovirus, parainfluenza, uye parvovirus inopihwa pamberi pevhiki sere ine booster mavhiki maviri kana mana gare gare.
Shots dzinowanzo kupihwa pakati pevhiki nhanhatu negumi nembiri.
Mishonga yekudzivirira zvirwere inokurudzirwa kune vese vana kana imbwa dzisina nhoroondo yekudzivirira. Izvi zvinosanganisira canine parvovirus, distemper hutachiona, canine adenovirus-2 uye mune dzimwe nyika chimbwamupengo .
Leptospirosis inotsanangurwawo seyakaipfura muCalifornia .
Asina-epakati mapfuti anosarudzika. Izvi zvinofanirwa kutariswa zvichienderana nenjodzi yekufumurwa uye nemararamiro echipfuwo. Mishonga isiri-yepakati inosanganisira:
Chekupedzisira, pane asina unclassified majekiseni akadai canine coronavirus.
Dzimwe pfuti dzinoonekwa sedzesarudzo nekuti dzinoonekwa pane kesi uye njodzi hwaro ( i.e. mararamiro embwa yako kana nzvimbo yenzvimbo inovaisa munjodzi ).
Dzimwe nguva kupora hakubatsiri kudzivirira chirwere ichi. Imbwa dzakabayirwa 'kennel kukosora' dzinogona kuchiriwana.
Zvakawanda zvezvirwere zvinotapukira zvakare kuzvidzora kana kupindura mushe pakurapa saka zvakagadziriswa mushonga uri nani pane kudzivirira.
Izvo zvakakosha kuti ukurukure izvo zvinopfura mbwanana yako inoda neveti yako zvichibva pane zvese kwaunogara uye nemararamiro ako.
Mhedzisiro inowanzoitika yemapfuti kuneta, kutsvuka kana kuzvimba panzvimbo yekudzivirira, kurasikirwa nechido uye low-grade fivhiri.
Kune mamwezve akakomba mhedzisiro mhedzisiro inosanganisirwa nemajekiseni anosanganisira:
Akazvimba kana kuzvimba maziso.
Izvo zvakakosha kuudza vet yako nezve mhedzisiro mhedzisiro nekukasira.
Mishonga yekudzivirira zvirwere yakakosha kubatsira kubatsira vana kuti vagare vakagwinya uye vakagwinya.
Kuchengeta ivo kusvika parizvino kunowanzo kuve chinodikanwa cheinishuwarenzi yako.
Varidzi vazhinji vanokumbira vet yavo kuti vape iyo 5 mu1 pfuti kuti vabaire jekiseni rekuzvidzivirira, adenovirus, parainfluenza uye parvovirus. Iyi pfuti inopihwa mukati memavhiki matanhatu kusvika masere uye booster inotevera mavhiki maviri kana mana gare gare.
Majekiseni chinhu chakakosha chembwa muridzi uye kunzwisisa kuti ndezvipi pfuti dzinodiwa nevechidiki zvakakosha. Kana usina chokwadi siya mhinduro pazasi kana kutaura nachiremba.
Mufudzi wechiGerman Malamute anosanganisa yakanaka yambuka?
Nhema dzeGoridhe Dzosa: Izvo Zvaunonyatso Kuziva
Homemade imbwa shampoo ine kokonati mafuta
blue nose pitbull rottweiler musanganiswa
imbwa yakaoma heaving but acting normal
golden lab uye german shepherd mix
golden retriever/ german shepherd mix